सरकारसँग हत्या बिरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलन थेग्ने सामर्थ्य छ ? – सुमनसिंह पौडेल::mirmireonline.com
यतिबेला केपि – पिके गठबन्धनको सरकार र त्यसमा पनि खास बादल नेतृत्वको गृह प्रशासन सबै हिसाबबाट रास्ट्र र नागरिकहरु बिरुद्ध जाइलागेको छ । सोही मेसोमा सरकार चौतर्फी बदनाम र अलोकप्रिय बनेको आम जनताको आलोचना, आक्रोश र प्रतिरोधको मुख्य निशाना बन्दै गएको स्पस्ट देखिन्छ । आँफुलाइ कम्युनिस्ट त्यसमा पनि जोडबल लगाएरै समाजबादी सरकार र पार्टी भन्न रुचाउने र सोही अनुसारका प्रचारहरु गरिरहेको डबल नेकपा र त्यसका नेताहरु ब्यवहारत जनताहरुको बिचमा सर्बाङ्गै भएर नाङ्गिएका छन । र उनिहरुको वरिपरि समाजबादी नीति तथा कार्यक्रम होइन बरु दलाली, भ्रस्टाचार, कमिसनखोरी, बलात्कार ,लुटखसोट र विभिन्न काण्डहरु झांगिन पुगेको छ । त्योपनी सामान्य स्तरका छैनन कि, बरु यो देशै बिघटित गराउन सक्ने, नेपालका सम्पुर्ण प्राकृतिक श्रोत साधन बिदेशिहरुलाइ सुम्पने, आन्तरिक रास्ट्रिय सुरक्षालाइ प्रभावित पार्ने यस्ता प्रकारका कृयाकलाप वर्तमान केपि- पिके मण्डलिको मुख्य विशेषता बन्न पुगेको छ ।
होलि वाइन काण्ड, इन्डो प्यासेफिक काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण,मेडिकल बिधेयक, जनकपुरमा मोदि केपिको ‘ठुल्दाइ सानुभाइ प्रहसन’, वाइडबडी भ्रस्टाचार प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण आदि ठुला ठुला घोटालामा डुबेको सरकार आफुलाइ निरन्तर समाजाबादी भएको, कम्युनिस्ट भएको, र जनतालाइ सुख शान्ती समृद्धी दिने सपना रहेको बिषय ढोल पिटेर प्रचार गर्न छाडेको छैन । तर उसको यो प्रचारको आधारभुमि बाट यसका ब्यवहारहरु नियाली रहेका नागरिकहरु केपि ओलि र पुस्पकमल दाहालको जोकर ,भद्दा र अशिस्ट फांसिबादी शैलि र नाङ्गो र घृणित व्यवहार बाट आजित बनेर यो सरकारलाइ दलालहरुको कठपुतली रास्ट्रघातीभन्ने निस्कर्समा पुगेका छन ।
अझ सरकारका यस्ता घृणित ब्यवहारको बिरुद्ध आवाज उठाउंदै रास्ट्रमा देखिएको संकटको हल बैज्ञानिक समाजबादी सत्ताले मात्र गर्न सक्ने राजनैतिक दृष्टिकोण राख्दै इमान्दारिता पुर्वक जनताको बिचमा रहेर जनताको पक्षमा संघर्ष गरिरहेको नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिलाइ प्रतिबन्धित गर्नु, उसले उठाएका तमाम माग मुद्दाहरु विरुद्ध अंकुश लगाउनु र यती मात्र होइन संयौको संख्यामा सो पार्टिका नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी गर्नु, झुट्टा मुद्धा लगाएर जेल हाल्नु कुटपिट गर्नु, सर्च एण्ड एरेस्टको नाममा गाउँ गाउँ गएर सर्वसाधारण जनतालाइ आतंकित पार्नु र सो पार्टिका नेता तथा कार्यकर्तालाइ गिरफ्तार गरेर मुठभेटको कथा रचेर हत्या सम्म गर्नुले यो सरकारको कम्युनिस्ट आवरण भित्रको अन्तर्कथा र सरकार संचलाक केपि-पिके र बादल हरुको ईतिहास, वर्तमान र भविस्य र नागरिक प्रतिको उनिहरुको जवाफदेहिताको बिसयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
वर्तमान सत्ताको बिकल्पको बिसयमा थप बलियो बहस, आन्दोलन, प्रतिरोध र भयानक युद्धको चित्र बन्दै गएको तथ्य प्रसस्तै जुटिरहेका छन । छापा तथा बिधुतिय संचार माध्यममा आएका समाचार हरु, सामाजिक संजालमा आइरहेका टिप्पणीहरु, जनताको बिचमा गएर गरिएका छलफलहरुमा जनताले दिएका प्रतिक्रियाहरु सबैलाइ जोडेर समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकार बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले संस्लेसण गरे जस्तै दलाल पुंजिवादी संसदिय सत्ता, सामाजिक फांसिवादी सत्ताको बफादार कारिन्दा दलाल सरकार बन्न पुगेको छ । बिद्रोही नेकपा माथिको दमन, हत्याको शृङ्खलाले यो सरकारलाइ जनताबाट पुरै अलग्गिने स्थितिमा पुर्याएको छ । र जनता बिद्रोही नेकपाको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत वर्तमान फाँसिबादी सत्ता बिरुद्ध प्रतिरोध युद्धमा जुट्ने देखिन्छ ।
बिद्रोही नेकपा र केपि सरकार बिच प्रतिबन्ध पछिका बिकसित घटनाक्रम
गत फागुन २८ गते सरकारले बिद्रोही नेकपा माथी प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्ध बिदेशि शक्तिकेन्द्र हरु र नेपालका ठुला माफियाहरुको योजना बमोजिम थियो । आंफुलाइ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रधानमन्त्री ठान्ने केपि ओलि/ प्रचण्ड र त्यांहा भित्रका नेता तथा मन्त्रीहरु लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा फरक मत राख्ने, अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्न पाउने सामन्य अधिकारहरुको समेत उलंघन गर्दै फरक बिसय र माग राखेकै आधारमा नेकपा माथी प्रतिबन्ध लगाउन पछि परेनन । भ्रस्टाचारको बिरोध, एनसेल कर ठगि विरुद्धको आन्दोलन, उर्जा सम्झौता, पानी सम्झौता, र बिभिन्न काण्डहरुको बिसयमा बिरोध गर्दै सामाजिक सरोकारका बिसयमा आन्दोलित भएकै आधारमा बिद्रोही नेकपाले प्रतिबन्धको सामना गरिरहनु परेको छ ।
प्रतिबन्ध पछि सरकारले व्यापक रुपमा धरपकड बडायो । पार्टिका स्थाइ समिती सदस्य सुदर्शन, पोलिटब्युरो सदस्य रणबिर, केन्द्रिय सदस्यहरु प्रज्वलन, आदर्श, असल, बन्धुचन्द लगायत विभिन्न जिल्लाका इन्चार्ज सेक्रेटरी, जिल्ला सदस्य हरु, बिधार्थी र समर्थक सुभचिन्तक सम्मलाइ करिब ५०० को संख्यमा गिरफ्तार गर्यो र यो शृङ्खला चलिरहेकै छ । बिभिन्न बुद्धिजीवी , नागरिक अभियान्ता, कलाकार, पत्रकार , सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले सरकारको यो कदम प्रती बिरोध जनाउदै प्रतिबन्ध खारेजको माग राखिरहेका छन । सरकार वार्ताको प्रचार गर्दै वार्ताको अन्तर्यमा व्यापक दमनको तयारिका गर्दै छ भन्ने बिसय सरकारका ब्यवहारहरुले स्पस्ट गरिरहेको सबैले बुझिरहेकै थिए ।
सरकार फांसिवादी बन्दै गएको थियो – पुर्वको भोजपुर टैम्केमयुङ्गमा जेष्ठ ७ गते नेकपाका युवा तिर्थराज घिमिरेलाई पक्राउ गरि निर्घात कुटपिट पछि हत्या गरियो र मुठभेटको कथा रचियो । यो हत्या सरकारको नियोजित चालबाजी थियो । श्रोतका अनुसार- भोजपुरमा बिप्लवको सेनाको गतिबिधी रहेको जानकारी पाएपछि १ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राई, डिआइजी केदार रिजाल, प्रदेशकै अन्य केही मन्त्री, भोजपुरका सिडिओ भेला भएर ठूलो अपरेसन गर्ने योजना बनाइ नरसंहार गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उक्त रक्सी बैठकमा बिगत देखिनै बिद्रोही नेकपा प्रती दुश्मनी व्यवहार गरिरहेका प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री र अन्य केही मन्त्रीले जत्रो सुकै घटना घटेपनी पछि हल गरौंला भनेर प्रहरिलाइ पठाएको कुरा खुल्नमा आएको छ । प्रहरी हरु त्यो हिसाबले तयार भएर गएपनी पिआइ गरिरहेका युवा तिर्थाराजलाइ समाएर मार्न पुग्यो र अर्का एकजना युवा त्यंहाबाट उम्कन सफल भएका थिए ।
त्यस घट्ना पछि तिर्थराजलाइ महासचिब बिप्लवले सहिद घोसणा गर्दै चरणबद्द संघर्सका कार्यक्रमहरु सार्वजानिक गरे । फांसिवादी अल्बर्टो फुजिमोरी, र ज्वतिबसुको नंया संस्करण केपि – पिके मण्डलिको दलाल सरकारले बिद्रोही नेकपालाइ बिरोध संघर्ष गर्न बाध्य बनाएको थियो । सोही क्रममा नेकपाले आयोजना गरेको नेपाल बन्दको पुर्वसंध्यामा बन्द संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेका होनाहार ५ जना युवाहरुको शाहादत हुन पुग्यो । बन्दको पुर्व संन्ध्यामा शाहादत हुने महान, दिपेन्द्र, निरन्तर, प्रज्वल र रामकुमारको मृत्यु यहि फांसिबादी सरकारको कारण भएको थियो । र यो केपि- बादल सरकारको अर्को हत्या शृङ्खला थियो ।
त्यसपछी असार ५ गते दिउँसो अचानक एउटा खबर आयो सर्लाहिका इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी संगको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको छ । उनको साथबाट पेस्तोल बरामद भएको छ, अन्य ३ जना भाग्न सफल भएका छन । सरकारले यस्तो प्रचार गर्यो । यधपि ५ गतेको समाचार पछि परिवारले ३ दिन पछि लास बुजुन्जेल सम्म प्राप्त तथ्यलाई आधार मानेर हेर्दा कुमार पौडेको दोहोरो भिडन्तमा नभएर फेक इन्काउन्टरमा हत्या भएको पाइएको छ । पौडेललाइ कुटपिट गरि दुइवटै हात भांचेको हातको अस्वभाविक अवस्था प्रस्ट देख्न सकिन्छ । उनको छेउमा फालिएको रिभल्वर उनको नभएर त्यो प्रहरिलेनै राखिदिएको स्पस्ट हुन्छ । किनकी उनको लास घिसारेर त्यंहा पुर्याइएको जमिनको अवस्था हेरे पछि प्रस्ट देखिन्छ । लास घिसार्दा पेस्तोल कसरी घिसृयो ? र भिडन्त गर्दा गर्दै मारिएका हुन भने लास किन घिसार्नु पर्थ्यो? उनको टाउकोमा गोलि नजिकै बाट हानिएको बुझ्न सकिन्छ । घटनास्थलको अवस्था, लाशको स्थिती, र त्यस अघि पछिका कृया प्रतिकृयाको आधारमा जो कोहिले सहजै अनुमान लगान सक्छ कि पौडेल हत्या भिडन्त होइन यो नियोजित फेक इन्काउन्टर हो भनेर । यस हत्याको उचित छानमिन गरि तथ्यहरुको आधारमा सत्य सार्वजनिक हुने कुरामा आम नागरिक आशाबादी छन ।
यसरी राज्य दमन तिब्र बन्दै गएको छ । निहत्था नागरिकहरुको पंचायतिशैलिमा हत्या गर्न थालिएको छ । झुटा मुद्धाहरु लगाउन थालिएको छ । सर्च एण्ड एरेस्टको नाममा एरेस्ट एण्ड किलको नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । पक्कै पनि सरकारको यो कदमले द्वन्दको संकेत गरेको छ । र सरकारी दमनको सम्भावित प्रतिरोधले निम्त्याउने आगामी अवस्थाको बिसयमा सबै गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
के हुन सक्छ त अब ?
देशमा बिधमान जनताका समस्या र संकटहरु राजनितिक समस्याहरु हुन । यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष राजनिती संग हुन्छ । जनताहरुले माग्ने अधिकारहरुको गुदि कुरानै तिनै आधारभुत आवश्यकताका बिसयहरुकै सेरोफेरोमा छन । ती हुन गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा । यी बिसयहरुको सुनिश्चितताको लागि जनताले राज्य सत्ता संग माग राखे त्यो २००७/०१७/ ०३५/०३६/०४६/०५२/०६२/०६३ हरुमा जनताले आफ्ना मागहरुलाइ उत्कर्समा प्रकट गरेका थिए । राज्यले ती मागहरु संबोधन गर्नु त कता कता उल्टो दमन, हत्याको नीति लियो । हज्जारौं नागरिकहरुको कत्लेआम गर्यो । जनताले ब्यवस्था ढाल्दै यहाँ सम्म आइपुगे तर नाममा फरक भनिएपनी सारत जनता माथिको लुट र सोसण रोकिएन बरु झन बढ्यो । जनताले रुपमा सत्तालाइ जितेपनि सारमा त्यही पुरानो सत्ताको चरित्र नंया संस्करणमा नंया पात्रहरुको साथ हाल सम्म शासन सत्तामा छ ।
जनताका आधारभुत बिसयहरु जोडिएका जनताका प्रस्तावहरु राजनैतिक बिसयहरु हुन । ती ज्युका त्युं छन, त्यसैले आजको मितिमा पनि जनताले आफ्ना मागहरु राख्न पाउनु, बोल्न पाउनु र बिद्रोह गर्न पाउनु जनताको अधिकारको बिसय हो । राणाहरुको शासन सत्तामा जनताले उठाएका सामन्य मागहरुबाट आत्तिएर त्यतिबेला होनाहार युवाहरुको हत्या गरियो । पंचायतले कंयौको हत्या गर्यो, धनकुटा खुकुछिन्ताङ हत्या काण्ड, झापाका होनाहार युवाहरुको हत्या, भोजपुरमा युवाहरुको हत्या, भिमदत्ता पन्तको हत्या , जनयुद्धमा दशौं हजार युवाहरुको हत्या यसरी सत्ता संचालकहरु जनताको हत्या गर्दै आइरहेका छन । यिनै बलिदानका कथाहरुमा नायकको भुमिका खेल्ने पात्रहरु प्रकारान्तरमा खलनायकमा रुपान्तरित हुँदै फेरि त्यही हत्या शृङ्खलालाई आंफैले निरन्तरता दिइरहेका छन । कुमार पौडेको हत्या त्यसकै निरन्तरता हो । यो हत्या सम्म आइपुग्दा कंयौ सवाल जवाफहरु पैदा भएका छन ।
वर्तमान दलाल पुंजिवादी संसदिय सत्तानै बिधमान सबै संकटको मुख्य कारक तत्व हो । र यसको समाधान बैज्ञानिक समाजबादी सत्ताले मात्र गर्न सक्छ । बैज्ञानिक समाजबादि सत्ताको बिकल्प दिएर आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको नेकपा आफ्ना योजनाहरु बाट पछाडी हट्ने छैन । किनकी यो प्रस्ताव समाज बिकासको नियममा अनिवार्य सर्त हो । र यो पुरानो सत्तालाइ निसेध गर्दै कुनैपनी हालतमा स्थापित भएरै छाड्ने छ । बर्ग प्रधान समाजको अनिवार्य संघर्षको नियममा मुख्य सुचालकको स्थान बनाएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, पार्टी र त्यसका सुब्यवस्थित शाखा प्रशाखाहरुको बिघटन, बिसर्जन, हस्तान्तरण र सम्झौता जस्ता प्रभाव बाट एकीकृत जनक्रान्ती र नेतृत्व मुक्त रहने छ । यो आन्दोलनको प्रकृया बिश्वको पुंजिवादी संकटको स्थानमा बैज्ञानिक समाजाबादको बिश्व शिविरलाई स्थापित गर्ने र बिश्वलाइ साम्यवाद सम्म पुर्याउने साम्यवादी झन्डा फहराएर अगाडि बढ्ने छ ।
बरु घटना क्रमले के कुरा उत्घाटित गरेको छ भने दमन बिरुद्ध ससक्त, ससत्र प्रतिरोध, रास्ट्रघाती र जनघाती हरुमाथी निर्मम भौतिक कारबाही , त्यसले पैदा गर्ने व्यापक सामाजिक जागरण , विशाल संयुक्त मोर्चा, विशाल जनसागर सहितको प्रदर्शन, जनमुक्ती सेनाहरुको सचेत फौजी पहलकदमी, देशभक्त रास्ट्रवादी र रास्ट्रघाती शक्तिहरु बिछ हरेक निकायमा ध्रुबिकरण हुँदै रास्ट्रिय मुक्ती आन्दोलनको आधार तयार गर्दै सामाजिक फांसिबादि सत्ता बिरुद्ध अन्तिम र निर्णायक हमला हुने छ । यस्तो परिवेश निर्माण भएर जाने बिसय समाजको विश्लेषण गर्ने जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । तर यसको बिचमा दमन र प्रतिरोध संघर्षको भिसण शृङ्खला भने रहने छ । यसमा देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिले सचेतता पुर्वक पहलकदमी लिन जरुरी छ । आन्दोलनको यो नियम भित्र स्वभाविक रुपमा बलिदानको बिसय आंउछ, र दुनिंयालाइ नयाँ ठाउँमा लैजान बलिदान गौरवको बिषय बन्ने छ ।
वर्गसंघर्षको ईतिहास बलिदानहरुको इतिहास पनि हो । यधपी यो बिसय राम्रो संग बुझेका सत्ताधारिहरु क्रान्तिकारी शक्ति माथी दमन र हत्याको दुश्चक्र चलाइरहेका छन । तर उनिहरुलाइ सामन्य हेक्का हुनु पर्ने हो कि दमन बिरुद्ध सोझिने प्रतिरोध आन्दोलनको आगो आंफुतिर आउँछ र त्यसले आंफैलाइ खरानी बनाउने छ । कुमार पौडेलको हत्याको बिसयमा समाचारमा आएकै जस्तो मेयरले सुराकी गरेको तथ्य फेला पर्यो यदि भने मेयर भरत थापाको अवस्था के होला ? निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गर्न त्यंहा कुन कुन जंड्याहा हत्यारा पुलिस पुगेका थिए भन्ने कुरा थाहा लागिहाल्छ ती प्रहरिको नाम बदनाम गराउने मतियार भिजिलान्ते हरु अब कहाँ कुन देशमा गएर सुरक्षित हुन्छन ? यो त छंदैछ समग्र दलाल पुंजिवादी संसदिय सत्ता नै आफ्नो संकट ढाकछोप गर्न नसकेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेको यो अवस्थामा एकीकृत जनक्रान्ती हावी हुने कुरामा कुनै दुइमत छैन यस अवस्थामा पार्टी आन्दोलन नेता कार्यकर्ता र जनता माथी दमन र हत्या गर्ने जो कोहि को अवस्था के होला ? यो मेरो सब्दहरुले दिएको चुनौती र चेतावनी होइन यो परिस्थिती र परिवेशले दिइरहेको चेतावनी हो । सर्वप्रथम यि प्रश्नहरुको जवाफलाई मनन गर्न आवश्यक छ । र त्यही बुद्धिमतापुर्ण हुन जान्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । अन्यथा रोम साम्राज्य ढाल्न सक्ने स्पार्टाकसहरुको सौर्य र बलिदानी, पेरिस कम्युनमा कम्युनार्डहरुले प्रदर्शन गरेको बिरता, रुसमा मजदुरहरुले जारको सत्ता पल्टाएको ईतिहास, महान चिनियाँ जनताको संघर्सको कथा, भियतनाम, भेनेजुएला, क्युवा, भारतमा भैरहेको माओवादी आन्दोलन, नेपालको जनसंघर्सको शृङ्खलाको ईतिहास र बिश्वमा भएका कयौँ संघर्षहरुमा जनताको वीजयका इंतिहासहरुको समीक्षा गर्दा जनतालाइ दमन, हत्या गरेर दबाउने बिषय कहिलै सम्भव नहुने बरु यो अझ ससक्त भएर अगाडि बढ्ने अझ प्रज्वलित हुने बिसय प्रयोग सिद्द, प्रमाणित तथ्य हो । त्यसैले कुमार पौडेलको हत्या र अरु हज्जारौं कुमारहरुको हुन सक्ने सम्भावित हत्याले ज्वाला झन झन दन्काउने छ । भस्म हुनेछन सड्यन्त्रकारीहरु ।
२०७६/०३/०८ तेह्रथुम बाट